Imeyili Order Aluminium Snow Puser - China Richina
Shona Material: Aluminium Ingxubevange
Shona Usayizi: 460 * 230mm
Umugqa Richina yakhelwe abathengi ejwayele izici eliphezulu futhi ihlala isikhathi eside. Lokhu Aluminium Isithwathwa Pusher kuyinto engasindi futhi ehlanza esiningi iqhwa pass ngamunye. i- Aluminium Snow Pusher iyithuluzi eqinile inani elingavamile. Highlights, Aluminium Snow Pusher blade ubukhulu: 460 * 230mm, Blade Material Aluminium, Aluminium Snow Pusher obuphelele esisitholayo 1300mm. Uma ufuna leli Aluminium Snow Pusher ukuze uvumelane imeyili ukuze sikwazi igcwele kubo ngasinye, ngaphatha ibhokisi elinezincwadi.
Luhlala Isikhathi Eside Aluminium Snow lokwela , jikelele obuphelele 1300mm
Isithwathwa lokwela aluminium ukudla kwenkemba, usayizi 460 * 230mm
iqhwa lokwela nge powder camera ngensimbi isibambo
Ocean futhi basingathe zixhunywe ngezikulufo
Ufuna enhle Aluminium Snow Pusher Umkhiqizi & umphakeli? Sine a Ukukhetha eziningi ngamanani ezinkulu ukukusiza uthole yendalo. Zonke Aluminium Snow lokwela kukhona izinga yibhange. Singabantu China Umsuka Factory of Mail Order Snow Pusher. Uma kukhona umbuzo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Eziwisekayo Umfelandawonye lokwela for Izimoto
Okuningi Snow Push lokwela nge Aluminium Handle
Telescopic lokwela Khanyisa Isisindo Snow ephathekayo Sh ...